Beta-lixaad ee watcOS 4.3 hadda waa la heli karaa | Wararka IPhone
Beta-kii lixaad ee watcOS 4.3 hadda waa la heli karaa
Toddobaadkan waxay u muuqataa in wiilasha Cupertino ayaa ku deg degay oo waxay sii daayeen laba betas oo ka mid ah nidaamyadooda hawlgalka ee iPhone iyo Apple Watch, shanaad iyo lixaad beta ee labada iOS 11.3 iyo watchOS 4.3, qaar betas ah in wax walba u muuqdaan inay muujinayaan inay ku imaan doonaan noocooda usbuuca soo socda.
Shalay galab, Apple wuxuu sii daayay beta lixaad ee iOS 11.3, afar maalmood ka dib markii la bilaabay beta-kii shanaad iyo dhowr saacadood kadib, waxay soo saartay beta-kii lixaad ee watchOS 4.3, afar maalmood ka dib markii sidoo kale la bilaabay beta shanaad. Mar kasta oo Apple ay xawaaraha kor u qaado, waqtiga la sii deynayo nooca ugu dambeeya waa la gaabiyey.
Dhawr saacadood ayaa ka soo wareegay tan iyo markii la sii daayay watchOS 4.3 qaybteeda lixaad iyo dhammaadka wiigga, uma badna inay horumariyayaashu ku shaqeeyaan inay baari maxay yihiin wararka beta-kan cusub noo keenayo ee loogu talagalay Apple Watch. Waxyaabaha ugu waaweyn ee aan ku arki doonno imaatinka watchOS 4.3 qaybtiisa ugu dambeysa waxaan ka helaynaa:
Xulo afhayeenka Apple Watch si uu ugu ciyaaro waxyaabaha ka socda Xarunta Xakamaynta.
Xakamaynta barnaamijka Muusikada ee loo maro Apple Watch ayaa mar kale la heli karaa.
Markaad amreyso Apple Watch, animation cusub ayaa la soo bandhigi doonaa.
Habeyn habeen cusub al ku dallac qalabka, oo loogu talagalay Apple dekedda lacag-bixinta cusub ee loo yaqaan AirPower, saldhig xamuul oo sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay ay tahay inay gaaraan suuqa dhamaadka bisha Maarso.
Markaad furaneyso codsi, animation cusub ayaa la muujiyay, oo ka duwan wixii aaladda noogu adeegsan jirtay.
Ogeysiis cusub oo ku saabsan Apple Watch markaan isticmaalno waxaan u isticmaalnaa inaan ku furno marinka Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Beta-kii lixaad ee watcOS 4.3 hadda waa la heli karaa
GrayKey, tani waa aaladda muujin karta furahaaga iPhone
Spotify waxay lahaan doontaa cod raadin si ay kuu weydiiso muusig iPhone-ka